नेपालगञ्जमा पत्याउनै नसकिने २९ लाखको जुवा, हारेपछि पत्निलाई नै दाउमा राखे! – AB Sansar
नेपालगञ्जमा पत्याउनै नसकिने २९ लाखको जुवा, हारेपछि पत्निलाई नै दाउमा राखे!
October 30, 2020 adminLeaveaComment on नेपालगञ्जमा पत्याउनै नसकिने २९ लाखको जुवा, हारेपछि पत्निलाई नै दाउमा राखे!
काठमाण्डौं । महाभारतमा जुवा खेल्दा एक् पक्षले पत्निलाई नै हारेको कथा पढिएकै हो । बाँके जिल्लामा पनि यस्तै एक घटना भएको प्रकाशमा आएको छ । बाँकेका सिडियो राम बहादुर लिम्बुले फेसबुक मार्फत यस्तो जानकारी दिएका हुन् । फेसबुकमा सिडियो, लिम्बु लेख्छन्, ‘बाँकेमा महाभारतकालको झल्को दिने जुवा हिजोको प्रहरी अपरेसन पछि बन्द हुने अपेक्षा गरेका छौ ।’ **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
उक्त फेसबुक स्टाटसमा कमेन्ट गरेका एक प्रयोगकर्तालाई जवाफ दिँदै सिडियो लिम्बुले जुवाडे मध्ये एकले पत्निलाई पनि दाउमा राखेको जानकारी दिएका हुन् । तर सिडियोले महाभारतको जुुवाको कुरा उठाएपनि जु वा डे मध्ये कस्ले र कसरी पत्नि खालमा राखेको बारे फेसबुकमा कुनै जानकारी भने दिएका छैनन् त्यसैले यस कुराको स्वतन्त्र रुपमा पुष्टी भने भै सकेको छैन ।
बाँके प्रहरीले ठूलो जुवा खालमा छा पा मा रे र १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो । नेपालगन्ज बसपार्कमा रहेको कृष्ण प्रसाद वलीको घरमा जुवा खेलिरहेको सुचना प्रहरीलाई पुगेको थियो । त्यहाँ प्रहरी पुग्दा, नगद मात्र रु २९, लाख ४८ हजार ७ सय पाइएको थियो । यस सहित जुवा खेलिरहेका १० जना पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । जिल्ला र वडा प्रहरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरुलाई प्रचलित नियमानुसार कानुनी का’र’वा’ही हुने प्रहरीले जानकारी दिएको छ । नेपाल भाइरल न्युज बाट । **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
बढेको सुनको मूल्य तिहार नजिकिदै गर्दा आज शुक्रवार भने पत्याउनै नसकिने गरि घट्यो !
खुसिको खबर: १८ बर्ष उमेर नाघेका १०० जनाको लागि खुल्यो जागिर, यसरी दिनुस निशुल्क आवेदन !
December 16, 2020 December 18, 2020 Ab-संसार
धान रोप्न आमाबुबासँगै खेतमा गएका दुई बालकको पानीमा डुबेर मृत्यु,परिवारमा रुवाबासी
धनगढीका व्यवसायी लम्सालको नि,ध,न